Goodnight Mommy(2014) – Myanmar Subtitles
A mother should look out for her sons.	Aug. 29, 2014 Austria	100 Min.	R
Elias နဲ့ Lukas ဟာ ၁၀ နှစ် အရွယ် အမွှာညီအကို နှစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အမေဟာ မျက်နှာခွဲစိတ်ပြီး ဆေးရုံက ဆင်းလာကတည်းက အရင်ကလို မဟုတ်ဘဲ ထူးဆန်းလာတယ်။ အပြင်လည်း မထွက် စကားလည်း သိပ်မပြောတော့ဘူး။ နေ့ခင်းဘက်မှာလည်း နေရောင်မခံနိုင်လို့ဆိုပြီး ပြတင်းပေါက်တွေပိတ် လိုက်ကာတွေ ချပြီး နေတယ်။ Elias တို့ ညီအကို ကိုလည်း အ်ိမ်ထဲမှာ မဆော့ဘဲ ငြိမ်ငြိမ်နေခိုင်းပြီး ဆော့ချင်ရင် အိမ်အပြင် ထွက်ဆော့ခိုင်းတယ။်
ပြီးတော့ ထူးဆန်းတာတစ်ခုက ညီအကိုနှစ်ယောက်အနက် Elias ကိုပဲ စကားပြောပြီး Lukas ကို အရေးမလုပ်တာလည်း တွေ့ရတယ်။ သူတို့အမေဟာ အရင်ကလို ဟက်ဟက်ပက်ပက်မရှိတော့ဘဲ စိတ်တိုတတ်လာတယ်။ အဲဒီလို ထူးဆန်းတဲ့ အပြုအမူတွေကြောင့် မျက်နှာတစ်ခုလုံး မျက်လုံးနဲ့ပါးစပ်သာ ဖေါ်ပြီး ပတ်တီးအပြည့်စည်းထားတဲ့ အမျိုးသမီးဟာ သူတို့အမေမဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုတာသိလာတယ်။ သူတို့အမေ မဟုတ်ရင် ဘယ်သူလဲ? အမေက ဘယ်ရောက်သွားတာလဲ? ဘာဖြစ်သွားတာလဲ ? ဆိုတာ အမွှာညီအကို နှစ်ယောက် အဖြေရှာရတော့မှာ ဖြစ်တယ်။
Hollywood ရုပ်ရှင်မဟုတ်ဘဲ Austria ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ Goodnight Mommy ဟာ ဇာတ်လမ်း အစအဆုံး လျို့ဝှက်ချက်အပြည့်နဲ့ ရင်တထိတ်ထိတ်ကြည့်ရမယ့် ဇာတ်ကားပါ။ ကလေးသရုပ်ဆောင် နှစ်ယောက်ရဲ့ သရုပ်ဆောင်ကောင်းမှုကြောင့် ဇာတ်လမ်းဟာ ပိုအသက်ဝင်လာပါတယ်။
Review Credit – MOVIE MAG Myanmar
Translator: Waiha Lin Htin
Soliddrive( 720p )
IMDb Rating 6.7 26,618 votes